MDC T Inoti Rutsigiro Rwayo Harusi Kudzikira
Nyamavhuvhu 22, 2012
Mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora.
Bato reMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende, MDC-T, VaMorgan Tsvangirai, rinoti haritambire zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa nesangano ravana chipangamazano re Mass Public Opinion Institute, zvekuti rutsigiro rwebato iri ruri kudzira muvanhu.
Mutauririri webato iri, VaDouglas Mwonzora, vaudza vatori venhau kuti zvakabuda mutsvakiridzo iyi zvekuti rutsigiro rweZanu PF ruri kuwanda muvanhu manyepo.
Gwaro iri, iro rinonzi Change and New Politics in Zimbabwe, rinoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa, zvakaratidza kuti zvinotsigira Zanu PF kozotiwo zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe zvikati zvinotsigira MDC-T.
Tsvakiridzo iyi, iyo yakaitwa kubva kuma 2009 kusvika mwedzi wapfuura gore rino, inoratidzawo kuti rutsigiro rwemauto nevasori ruri kuwedzera. Asi asi VaMwonzora vati havabvumirane neizvi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaPedzisai Ruhanya, vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nezvekabuda mutsvakiridzo iyi nekuda kwezvikonzero zvekuti yakaitwa apo vanhu vaishungurudzwa.
Vatiwo zvimwe zvakabudawo mutsvakiridzo iyi ndezvekuti veruzhinji vari kufarira nhepfenyuro yeZBC nebepanhau reHerald handi zvechokwati kana pachitariswa zviri kuitika muvanhu.
Asi mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vati havashamisiki nezvabuda mutsvakiridzo iyi vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvido zvevanhu. Vatiwo nyaya yekupa vanhu minda pamwe nekupa masimba ehupfumi kuvatema ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti bato ravo riwane rutsigiro rweveruzhinji.
Mutsvikiridzo iyi, iyo yakaitwa ne Mass Public Opinion Institute, ichishanda ne Freedom House, makabvunzurudzwa vanhu chiuru nezana nechidimbu kubva munzvimbo dzakasiyana siya siyana munyika.